Saacid Shirdoon oo weli Xamar rajo-ka qaba!!
Friday January 20, 2017 - 04:45:13 in Wararka by Super Admin
Raisalwasaarihii Mooshinka xilka looga qaaday Saacid Faarx Shirdoon ayaa ka soo dhex muuqday Shir Magaalada Kampala ay ku yeesheen is baahaysiga uu Dr Faroole hogaaminayo ee dalka Somaliya raba inay Madaxda Sare ka noqdaan.
Waxaa uu sheegay in xildhibaannada maanta gacantooda ay ku jirto sida uu hadalka u dhigay badbaadinta umada Soomaaliyeed, islamarkaana looga baahan yahay in ay codkooda siiyaan shaqsi u taagan midnimada iyo in leysku keeno bulshada Soomaaliyeed.
‘’Xildhibaannada waxaan leeyahay howlweyn oo adag ayaan idinku soo fool leh, masiirka umada Soomaaliyeed gacantiina ayuu ku jiraa, waxaa leydinka baahan yahay in si miirqabta oo maskax leh aad codkiina u dhiibataan, waayo sida uu maanta xildhibaanka codkiisa u bixiyo ayeey Soomaaliya u ekaan doontaa, sidaa daraadeed waxaan ka rajeyneynaa in ay arintaa si wanaagsan uga fiirsan doonaan ‘’ ayuu yiri ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya.
Ugu danbeyntii, waxaa uu sheegay in xildhibaannada yihiin kuwo matala shacabka Soomaaliyeed, islamarkaana ay mas’uul ka noqon doonaan haddii ay u dooraan sida uu hadalka u dhigay hogaan xun.